Cilmu-nafsiga Ganacsiga | vfxAlert official blog
Ganacsiga cilmu-nafsiga - bilow maaraynta naftaada
Ganacsato badan ayaa la soo gudboonaatay xaalad umuuqda mid la yaab leh - waxay helayaan natiijooyin wanaagsan markay ku ganacsanayaan koontada demo, laakiin kuma soo celin karaan xitaa 50% markay la shaqeeyaan lacagta dhabta ah. Tusaalahani wuxuu cadeynayaa saameynta cilmu-nafsiga ee ku saabsan habka lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah .
La shaqeynta koontada dalwaddii, wuxuu si deggan u hirgeliyaa istiraatiijiyaddii ganacsi ee la xushay, si guul leh ayuu u adeegsadaa aqoontiisa. Isla marka ganacsade uu lacag dhab ah ku shubo koontada, shucuurtiisa, dabeecadaha aan macquul ahayn iyo cabsida ayaa farageliya habka ganacsiga. Aad ayuu u taxaddaraa, wuxuu qaataa khataro aan loo baahnayn, wuxuu xiraa booska waxtarka leh waqtiga ka hor, ama wuxuu galaa suuqa kahor isbeddelka isbeddelka.
Aqoonta dabeecadaha nafsaaniga ah iyo iskudhafyada u gaarka ah, xakamaynta shucuurta, la shaqeynta dabeecadaha miyir-qabka ah waxay u oggolaaneysaa maalgashadayaasha inay ka fogaadaan xaaladaha noocaas ah. Intaa waxaa sii dheer, ganacsade fahmaya sida suuqa «dad badani» u dhaqmi doono wuxuu saadaalin karaa dhaq dhaqaaqa qiimaha qalabka lacagta.
Qodobkaan, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan saameynta shucuurta iyo arrimaha caqliga ku ah waxtarka ganacsiga saamiyada. Sidoo kale hel talooyin kaa caawin doona inaad barato sida loo xakameeyo shucuurtaada markaad la shaqeyneyso calaamadaha ganacsiga.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee cilmu-nafsiga ah
Maskaxdu waxay ka kooban tahay shaqsi (dareen-ku-dhisan) iyo qaybo garasho. Nidaamyada iyo dawladaha la xidhiidha mid kasta oo ka mid ah ayaa xukuma habdhaqanka dadka. Nolol maalmeedka, marka loo eego heerka saamaynta dhaqdhaqaaqa aadanaha, waxay ku sugan yihiin xaalad isu-dheellitirnaan shuruudaysan, oo ujeedkeedu yahay mid qof walba u gaar ah. Ku xadgudubka isku dheelitirnaanta waxay keeneysaa isbeddel ku dhaca dabeecadaha caadeystay.
Dareenka - hababka maskaxda ee ku lug leh maaraynta dabeecadda aadanaha.
Farxad, cabsi, cadho, iyo raali ahaansho ayaa tusaale u ah shucuurta. Dadka shucuurta leh badanaa waxay ku kacaan ficillo lama filaan ah; had iyo jeer ma xakamayn karaan dhaqankooda. Dhinaca kale, dareen la’aan ayaa qofka ka dhigaysa in dabeecadiisu la mid tahay farsamo, taas oo waliba aan aad u fiicnayn.
Aagga garashada, oo ay ku jiraan fikirka, xusuusta, dareenka, garashada, fahamka iyo habab kale iyo dawlado, ayaa sidoo kale saamayn ku leh hawlaha dadka. Waa qaybtan maskaxda ee mas'uul ka ah jihaynta habdhaqanka, go'aan qaadashada, iyo hirgelinteeda.
Xawaaraha sare ee garashada, awooda in xoog la saaro waqti dheer, awooda lagu falanqeeyo macluumaadka si loo caawiyo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Si kastaba ha noqotee, shaqeynta xad-dhaafka ah ee garashada garashada ayaa si dhakhso leh u horseedda daal maskaxeed guud, oo si xun u saameeya natiijooyinka shaqada maal-gashadaha. Tani waxay sidoo kale khuseysaa eexda, labadaba dhinacyada caqliga iyo dareenka leh. Si kale haddii loo dhigo, isku dheelitirnaan maskaxeed oo shardi ah ayaa ah xaalad aan fiicnayn oo kuu oggolaanaysa inaad si joogto ah oo faa'iido leh uga ganacsato.
Xaaladda «shaqeyneysa» ee maskaxda ganacsaduhu waa in lagu hagaajiyaa si waafaqsan astaamaha nafsi ahaaneed ee shaqsiyeed, haddii lagu dhawaaqo. Tusaale ahaan, qof aad u qiiro badan waa inuu awoodaa inuu xakameeyo shucuurta intaan la xarayn. Astaamo kasta oo dabeecad ayaa loo isticmaali karaa si loo hagaajiyo natiijooyinka ganacsiga !
Halkee laga bilaabayaa?
U hoggaansanaanta sharciyada xakamaynta xaaladda nafsaaniga ah, u hoggaansamida edbinta ee istiraatiijiyadda ganacsiga ee la doortay, sameynta dabeecado caqli gal ah oo wax ku ool ah iyo xakameynta shucuurta ayaa ah hababka ugu muhiimsan ee maareynta maskaxda.
Xeerarka qasabka ah :
Marka hore, ganacsaduhu waa inuu ka hortagaa horumarinta xaaladaha maskaxda ee yareeya waxtarka waxqabadyadiisa. Raacida qawaaniinta soo socdaa waa mid ka mid ah hababka ugu awooda badan ee lagu xakamayn karo maskaxda, in kastoo, inkasta oo ay jiraan wax iska cad, hadana intooda badani ma raacaan. Marka, si loo kordhiyo waxtarka ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah, waxaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Seexo ugu yaraan 7 saacadood maalintii. Hurdo kugu filan waxay caadi ka dhigtaa xaaladda shucuureed ee qofka, waxayna sidoo kale hagaajisaa habka socodka garashada. Tusaale ahaan, ganacsade hurdo fiican seexday ayaa ka feejignaan badan inta uu shaqeynayo marka loo eego ganacsade bilaabay ganacsi ka dib goob lagu caweeyo.
Sii naftaada dhaqdhaqaaq jireed;
Ha u isticmaalin dawada lidka diiqadda iyo walxaha kale ee «firfircoon» kahor iyo inta lagu jiro shaqada. Dhex dhig calaamad u dhiganta inta udhaxeysa ganacsiga iyo wadista gaariga - gadaal kama tihid gawaarida oo waxaad daaran kartaa barta ganacsiga haddii aadan si buuxda u xakameynin ficiladaada;
Ka naso ganacsiga 5-10 daqiiqo saacad kasta. Soco, kuleyl samee. Isku day inaadan ka fikirin ganacsiga inta lagu jiro nasashadaada;
Ha bilaabin inaad shaqeyso haddii aad dareemeyso shucuur xoog leh. Euphoria, diiqad, cabsi, rabshad, farxad: dawladaha noocan oo kale ah waxay yareeyaan awooda qofka inuu si qoto dheer u qiimeeyo xaalada suuqa.
Raac istaraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah :
U hogaansanaanta joogtada ah xeerarka istiraatiijiyadda ayaa ah mid ka mid ah aaladaha ugu wax ku oolka badan ee lagu yareyn karo culeyska maskaxda qofka ganacsadaha ah. Istaraatiijiyaddu waxay ka ilaalinaysaa halista aan cudurdaarka lahayn, khaladaadka guud marka la aqbalayo meheradaha la furayo, iyo sidoo kale ilaalinta suuqa ee aan waxtarka lahayn;
Samee naftaada habka la doortay, adoo adeegsanaya nidaam abaalmarin iyo ciqaab ah. Tusaale ahaan, iskaa u hel inaad jebineyso sharciyada ganacsiga, xitaa haddii ay tahay xad yar oo ku saabsan mugga jagooyinka cusub. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dhiirrigelin kartaa naftaada inaad raacdo istiraatiijiyadda adoo dib u aqrinaya caddeynta waxtarkiisa maalin kasta.
Abuuritaanka dabeecadaha caqliga leh ee wax ku oolka ah :
Fikradda «caqliga saliimka ah» waxaa loo adeegsadaa aagag kala duwan oo cilmu-nafsiga iyo cilminafsiga ah si loo go'aamiyo qaabab maskaxeed oo deggan oo si gaar ah u saameeya dabeecadda aadanaha. «Cidna kuma aamini kartid», «Nasiib kuma lihi lacagta» ayaa tusaale u ah anshax xumo. «Xaq ayaan u leeyahay in aan khalad sameeyo», «cabsida iyo dhibaatooyinka ayaa tilmaamaya habka saxda ah» - dabeecadaha noocaas ah waxay kordhiyaan waxtarka waxqabadka aadanaha.
Aqoonso fikradaha aasaasiga ah ee aad u malaynayso inay ku siinayaan natiijooyin wax ku ool ah. «Xirfadaha xun iyo khasaarooyinka ayaa i baraya inaan si fiican u fahmo suuqa» - tani waa tusaale ka mid ah fekerka saxda ah ee istiraatiijiyada ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee saxda ah. Raac talaabooyinkan si ay u bilaabato inay saameyn togan ku yeelato natiijooyinka ganacsiga: ka dejiso fikrad wax ku ool ah aragtidaada kuna qor warqad. Akhri bayaanka la duubay oo ka fikir. Miyaad ku raacsan tahay waxaad qortay?
Ku qor warqadda qaabka caqliga leh warqad kale 20-30 jeer. Markaa cod dheer ku dheh. Marka waxaad ka caawin doontaa maskaxda inay aqbasho.
Had iyo jeer ku hayso buug yar ama warqad meel u dhow goobta shaqada, taas oo ay ku qoran yihiin dhammaan xeerarka maskaxda ee hadda la adeegsanayo. Waqti ka waqti ku celi.
Goobaha caqligalka ah ee wax ku oolka ahi waxay ka caawiyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyo nolol maalmeedka labadaba.
Xakamaynta shucuurta :
Awoodda xakameynta shucuurta waa mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee qof walba u baahan yahay.
Si aad ula qabsatid cabsida, u isticmaal farsamada «weerarka cabsida» ee loo isticmaalo daaweynta caqliga-shucuurta leh. Nuxurkeedu wuxuu ku jiraa xaqiiqda ah in marka hore aad u baahan tahay inaad sameyso ficillada uu qofku ka baqayo. Tusaale ahaan, haddii sababo jira awgood aad uga baqeyso inaad adeegsato calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, samee iyada oo aan loo eegin khasaarada suurtagalka ah.
Waxa kale oo aad qiyaasi kartaa waxa dhici doona haddii cabsidaadu sabab noqoto. Tusaale ahaan, haddii aad ka baqeyso inaad lumiso lacag dhigashadaada oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay go'aannada ganacsi ee xun, qiyaasi daqiiqadda ay tani dhab ahaantii dhici doonto. Ka fikir arrintaas, laga yaabee xaaladdan inaad wax fiican ka heli karto.
Intaa waxaa dheer, si joogto ah u raadso oo u adeegso farsamooyinka cusub ee cilmi-nafsiga si aad si wax ku ool ah u xakameyso shucuurta. Ogaanshaha xooggiisa iyo daciifnimadiisa, ganacsade wuu ka fiicnaan karaa kuwa kale inuu fahmo sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan; beddelo istaraatiijiyaddiisa ama qaabkiisa ganacsi waqtigiisa. Wuxuu sidoo kale fursad u helaa inuu saameyn ku yeesho garashadiisa iyo shucuur ahaantiisa, isagoo kordhinaya faa'iidada ganacsi ee hanti kasta iyo suuq kasta.